Xog: Ciidamada Farmaajo iyo Rooble ee isku hor-fadhiya Villa Somalia oo xal loo helay - Caasimada Online
Home Warar Xog: Ciidamada Farmaajo iyo Rooble ee isku hor-fadhiya Villa Somalia oo xal...
Xog: Ciidamada Farmaajo iyo Rooble ee isku hor-fadhiya Villa Somalia oo xal loo helay
By Zahra Axmed Gacal
Muqdisho (Caasimada Online) – Sida ay ogaatay Caasimada Online, ciidamo ka socda howlgalka AMISOM ayaa lagu wadaa in la kala dhex dhigo xafiisyada Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Madaxweyne Farmaajo oo khilaaf adag uu ka dhaxeeyo, xilli ay xiisad dagaal ka jirto Villa Somalia.
Villa Somalia ayaa waxaa isku hor fadhiyey ciidamo kala taabacsan Farmaajo iyo Rooble wixii ka dambeeyey dhacdii 27-ka December ee lagu afgambi rabay xafiiska Rooble, markaas oo kadib Rooble uu keensaday ciidan dheeraad ah oo suga amnigiisa.
Ciidanka AMISOM ee la geynayo inta u dhaxeysa labada xafiis oo ku wada yaalla gudaha Villa Somalia, ayaa ku imanaya hindise ay ka dambeyso beesha caalamka, waxaana la sheegay in aysan ka amar qaadan doonin dhinacna, balse ay ka hortagi doonaan in isku dhac uu ka dhaco Villa Somalia.
Villa Somalia ayaa waxaa horey u joogay ciidamo Amisom ah, oo suga amniga madaxtooyada, balse waxaa lagu xoojinayaa ciidamo dheeraad ah oo xiisadda kala dhex-gala.
Xogta ay heshay Caasimada Online ayaa intaas ku dareysaa in la dejin doono ciidan ka socday xafiiska Farmaajo oo qoryo la fuulay dusha sare ee Haan-biyood ku taalla gudaha madaxtooyada, halka qeybaha sare ee xafiiska Rooble laga dejinayo ciidan kale oo difaac uga jira.
Xaalada madaxtooyada ayaa u muuqata mid qarka u saaran gacan ka hadal, Ra’iisul Wasaare Rooble iyo labo ka mid ah wasiirrada taabacsan, oo iyagana degan xeendaabka waxay soo xareysteen hub iyo ciidan xoog leh.
Wasiirka Gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa horey u deganaa xeendaabka Villa Somalia, balse waxaa toddobaadkan kusoo biiray oo soo degay wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur, waxayna degan yihiin guryo u dhaw xafiiska ra’iisul wasaaraha, labada wasiir ayaa la sheegay in ciidan xoog leh ay wataan.
Wixii ka dambeeyey markii uu fashilmay afgembigii la sheegay in Farmaajo u maleegay Rooble waxaa cirka isku shareeray kala aamin-baxa labada nin ee kala joogta xafiisyada ugu sareeya dalka.
Maalmihii u dambeeyey Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa u xusul duubayey inuu la wareego mas’uuliyadda ammaanka guud ee dalka, balse waxaa ka hor taagan madaxda dowlad goboleedyada taabacsan Farmaajo, waxayna hadda doodaasi saaran tahay miiska shirka golaha wadatashiga qaranka, inkastoo la dhaqaaji waayey.
Dooda Rooble ee ah inuu Farmaajo laga wareejiyo masuuliyadda ammaanka dalka ayaa hadda u muuqata mid sii dhimaneysa, waxaana aad looga dooday shalay, iyadoo maanta la isku deyey in xal laga gaaro cabashadii ka soo laabatay kuraasta dooran ee golaha shacabka, balse ilaa hadda wax la isku fahmay lama shaacin.
Zahra Axmed Gacal
UAE uses ‘humanitarian diplomacy’ to mend fences with Somalia
Caasimada Online - January 22, 2022
Diplomatic relations between Somalia and the United Arab Emirates (UAE) have been at their lowest point since 2018, when Somalia accused the small Gulf...
4 killed, 10 wounded in suicide attack in Somalia’s capital
English January 18, 2022
Somalia government spokesman wounded in blast in capital
English January 17, 2022
British ‘White Widow’ splits from her FOURTH husband and flees Somalia
English January 16, 2022
Kenya renews Lamu oil search amid Somali row
English January 12, 2022
Somalia apologises to UAE for seizing $10m from Emirati jet in 2018
English January 8, 2022
10 Years On: Inside Turkish Airlines’ Somalia Service
English January 7, 2022
Rewarded MP Seat at Federal Somalia Parliament 11th by Ahmed Madoobe
Revival of Somalia’s political Integrity depends on exiling Farmajo
English January 2, 2022
Here are the Top 10 cryptocurrencies of 2021
English December 31, 2021
US urges Somali leaders to cease escalatory rhetoric
English December 30, 2021
Somalia’s allies fear instability as political crisis deepens
English December 29, 2021
United States & International Community must show willingness to punish election spoilers
English December 28, 2021
Somalia’s PM accuses president of ‘coup attempt’
Somalia President, PM bicker in public over ‘right course’ of elections
English December 26, 2021
Body of missing Somali Imam in Columbus, Ohio found inside vehicle
English December 25, 2021